Ngaba usisidenge unjalo nawe? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-2 Septemba 2019	• 7 Comments
Ngaba usisidenge unjalo nawe? Kuthekani? Malunga nenyaniso elula yokuba phantse wonke umntu okujikelezileyo usakholelwa ukuba ipolitiki yinto enokuthenjwa. Abantu bacinga ngokwenene ukuba idemokhrasi ikho. Ewe unokucinga:Ewe, ndiyayikholelwa loo nto. Isenokungahambi ngendlela ebekufanele ngayo, kodwa ngenene siphila kwidemokhrasiMsgstr ". Ndingakucela ke ukuba uqhubeke nokuncamathela entlabathini yakho kwisanti efudumeleyo kunye nayo yonke iNetherlands? Okanye ngaba usafunda ngokuthe kratya, ngenxa yokufuna ukwazi okungachaphazelekiyo?
Lixesha lokuba ubone umhlaba njengoko unjalo. Umbono wakho wehlabathi unombala ngokupheleleyo. Ukusuka kubuso ukuya 'apha kwaye ngoku' ulungiselelwe ngombono wehlabathi ongalunganga. Oko kuqala kubazali bakho abazilungiselele ngokwabo kwaye badlulisele inkqubo kuwe. Nokuba bebevukele kwicawe yabo yesiko okanye kwiqela lezopolitiko. Mhlawumbi bona ngokwabo batshintshile ukusuka kwi-PvdA ukuya kwiGroenlinks okanye babengamahippies okwenyani.
Uyilungiselelwe bonke ubomi bakho ngombono wehlabathi ogqitywe yimfundo, imithombo yeendaba, umculo, iimovie, iimagazini, irediyo, i-intanethi, uFacebook, njalo njalo. Ukuba ngoku ucinga:Ewe iyavakala. Sonke sihlala kwihlabathi elinye, ke sonke sibona ngaphezulu okanye ngaphantsi izinto ezifanayo. Ubuninzi ukusuka kwikona eyahlukileyo; ukuba uzalelwe kwelinye ilizwe, kodwa sonke sihlala kwilizwe elinyeMsgstr ". Kungaba lixesha lokuba ubone ukuba yonke into ethe yafunwa ngamehlo neendlebe ngexesha lokuphila kwakho igqitywe kuphela liqela elincinci. Mhlawumbi izigidi zabantu zisebenzela iklabhu encinci, kodwa ezo zigidi zabantu zixhomekeke emsebenzini wabo kwaye bonke basebenza kwincinci elincinci kangangokuba bengahoyi umfanekiso omkhulu. Kodwa ngaphezulu kwako konke, bona ngokwabo bacwangciselwe kwasebusaneni abangazi ngcono kwaye, njengawe, bakholelwa kule nyaniso ingeyonyani eqokelelweyo.
Kusenokwenzeka ukuba nawe uyakholelwa ekubeni izindlu zasebukhosini azinakuthetha. "Izindlu zasebukhosini ziba ngumthendeleko kuphela. Banomsebenzi obalulekileyo wokuthengisa, kuba ngamanye amaxesha baya kuthunyelo lokuya kwelinye ilizwe kwaye emva koko bathathe abaphathi kwiinkampani ezinkulu ukuba babuye nemicimbi emikhulu. Babaluleke kakhulu kule nto. Ziluncedo kakhulu kwilizwe lethu.'Ngaba ndiwuchaze kakuhle umfanekiso wakho wosapho lwaseNetherlands? Ukuba ungumfazi, kungenzeka ukuba ubuphupha ngoCinderella kunye nenkosana kwihashe elimhlophe, kwaye kusenokwenzeka ukuba umama wakho ubukele inqwelo yegolide kunye noMhla weNkosana kwiTV eneglasi yeorenji ekrakra. Ngaba ndingaphinda ndinike ingxelo elandelayo kwakhona? Uyilwe nomfanekiso ongahambelani ngokupheleleyo kunye nenyani.
Wonke umenzeli, igqwetha, ijoni, abasebenzi bakarhulumente, ijaji, umphathiswa, igosa eliphandayo elingaqhelekanga (i-BOA)-njalo njalo-ufunga ukuthembeka kwisithsaba. Ke nakwintsapho yasebukhosini. Isiginali kabani phantsi komthetho wonke? Ewe, yeyenkosi. "Ewe, kodwa loo mithetho yenziwa kwiinkqubo zedemokhrasi kwaye kukho ingxoxo eninzi malunga noko kwaye ekugqibeleni uya kuza nento elungiselelwe ngokwesivumelwano phakathi kwemibutho enkulu yezopolitiko. Kwaye la maqela amele ilizwi labantu kulandela iziphumo zonyuloMsgstr ". Usayikholelwa loo nto, akunjalo? Umdala kangakanani Bangaphi oorhulumente owababonayo ngaphambili? Kodwa ngaba usayikholelwa?
Ngaba uyakholelwa nokuba iingxoxo zerediyo kunye nomabonwakude, ezinjengoJeroben Pauw, u-Eva Jinek okanye iDWDD, ziyinyani ngokupheleleyo? Ngaba awukholelwa ukuba oku kunokukhokelela kukukhokhelwa kancinci? Uyazi ngokuqinisekileyo ukuba abo bantu basetafileni abekho kwishoni apho kwaye ukuba ingxoxo ikhona kuphela yokuxhasa ukubonakala kokugxeka okanye ukuphambukisa ingxoxo kowona mbuzo uphambili?
Siyavunywa ukuba sihlaziyiwe kakhulu, kufuneka ndivume. Umzekelo, ndandisazi ngokusuka kwiForum kaTierry Baudet yeFemocracy (FvD) ukuba le yayiyimpazamo yamandla afundisiweyo. Umntu onokuba nenkcaso ethembekileyo. Xa ubona inkqubo yengxoxo kwiTV, ucinga ukuba iyinyani kwaye ekugqibeleni ukho umntu onomdla wokugxeka kakhulu. Hayi ukubetha esifubeni sam, kodwa ndikuxelela oku njengomzekeliso. Emva kwayo yonke loo nto, bendiqikelele ukuba ukunyuka kwe-FvD kuphela kwaye yayikukuphela kwayo ukugqithisa ukugxeka eluntwini, ngokuyidibanisa 'nokucinga okuhle, ubuqhinga, ubuzwe kunye nokungahlonitshani kwabafazi', emva koko ukubeka le bhombu emoyeni. ukwenza isebenze iphantsi kabini. Okwangoku sibona inkqubo efanayo kwihlabathi liphela. Funda ngaphambili eli nqaku ngokucokisekileyo.
"Kulungile Vrijland entle, yonke loo nto yokugxeka, kodwa masenze ntoni emva koko?"Ukuba undibuza kwaye uqala, malunga nexesha oza kuqala ngalo ukubona ukuba umfanekiso wakho wehlabathi ngumfanekiso wombala wangaphandle ngokupheleleyo: umfanekiso ocwangcisiweyo. "Ewe ulungile kwaye!? Ndihlala kulomhlaba, ke iyavakala?Ewe, iyavakala, kuba sonke senziwe. Ngaba oko kuthetha ukuba kulungile? "Ewe, kodwa andifuni ukuba ngumbhexeshi nokuba. Mandiqhubeke nokuthatha inxaxheba kwabanye!”Unako, kodwa ngaba unoluvo lokuba umhlaba uqhuba kakuhle? Andithethi ngalamatheko amnandi nawandwendwelayo ngexesha lasehlotyeni kunye neeholide zeveki ezilungileyo ze-2 kunye nayo yonke ibhiya enjalo. Ndithetha ngemeko yehlabathi jikelele malunga nokuhlawula irhafu, imeko, iimfazwe, izifo, njalo njalo. Ngaba ucinga ukuba izinto zihamba kakuhle nokuba iNetherlands ngokuqinisekileyo ililizwe elihle elinesakhiwo esihle.
Ewe, mhlawumbi ukule nkqubo yenkolelo:Thina maDatshi sinentengiso yendlela ehamba phambili kuyo yonke iYurophu. Sinemithetho elungileyo kakhulu, umzekelo, imicimbi yolwakhiwo, inethi elungileyo yokukhuseleka kwezenqanaba kunye nenqanaba elifanelekileyo lononophelo. Singosomashishini abalungileyo bamazwe aphesheya kwaye ezopolitiko kwaye nezobalo zibalaseleMsgstr ". Andilindelanga ngenene (ukuba ucinga njalo) ukuba uphelele apha kule ndawo, kodwa ungangumfundi. Abantu abafanayo abakholelwa ngokwenene kule nto bahlala benobunzima obukhulu bokwenza izibonelelo kwaye uninzi eNetherlands luphethwe zii-antidepressants, kodwa ikratshi ngokuqonda ukuba kukho into engalunganga kwenye indawo kunokuba bubungqina 'bamakhoboka abalungileyo'. Nokuba ukudinwa kukufuphi: siyagcina ukuhambisa iiflegi zeorenji ngoSuku lweNkosana kwaye siyaqhubeka nokukholelwa kwinkqubo ebeka ubunzima obungaka kuthi.
Isishwankathelo esifutshane kakhulu endinokukunika, esinokufuna ukuba ungene kuwe, yile:
Umbono wakho wehlabathi unombala liqela elincinci elinamandla kuyo yonke imfundo kunye namajelo eendaba kwaye libamba inkohliso yenkululeko yokuzikhethela phantsi kwegama lentando yesininzi. Abapolitiki bonke bangabadlali abaqeqeshiweyo abakwaziyo ukuphendula kwiimfuno kunye nezinto abanomdla kuzo kuluntu. Imithombo yeendaba inokwenza imibala ukuze incedwe kwaye incede ukubahlulahlula. Imidiya kunye namajelo eendaba ezentlalo akhona ukukukhokela ukuqonda kwakho kwaye wenze ivoti yinto engaphaya komgaqo wokuba ubuchwephesha bokusebenza busebenza njani ngempumelelo. Imithombo yeendaba kwezentlalo ikwabekw 'esweni ngumkhosi wonke' wababuyisi 'abanokuthi babe negama elithi Inofizieller Mitarbeiter kwi-GDR yangaphambili. Iziphumo ze-Facebook kunye ne-Twitter zihlala zilawulwa ngumkhosi, ozifihlayo emva profiles ezinzulu. Umfanekiso wakho wehlabathi unombala ngokusisigxina ngamajelo eendaba, iimagazini, unomathotholo, umabonwakude, iifilimu, umculo, njl. Uhlala kwenye ngokudibeneyo Trumanshow; yinyani ebubuxoki.
"Andikholelwa nje eVrijland phaya. Ithemba elinje kum. Awuyi kundixelela ukuba baninzi abantu abathatha inxaxheba kubuxokiMsgstr ". Abo bantu abazi ukuba bayabambisana, kuba bagcwalisa indawo encinci kakhulu kwaye akukho namnye kubo ongamela umfanekiso omkhulu. Ukuba ungaya nzulu kuwo (umzekelo ngamanqaku akwiwebhusayithi), uyakufumanisa ukuba umbono wakho wehlabathi wawungachanekanga ubukhulu becala. Qaphela, kuba unokukhutshelwa nakwiminatha yokhuseleko loluntu lwenyani. Ibhlokhi encinci yamandla elawula umhlaba ikwanayo inkcaso epokothweni yayo. "Indlela efanelekileyo yokulawula inkcaso kukukhokela wenaNgaba i-conco yabo. Ndiyichaze ukuba, phakathi kwezinye izinto eli nqaku.
Ukuba uthathe inkathazo yokufunda amanqaku phantsi konxibelelwano oluhlaza (zii-4 kuphela), ke siza kumbuzo wokuba kufuneka siwubone njani umhlaba. Injani eyokwenene yakhiwa ukuba isiphelo sichanekile ukuba sigcinwe kuhlobo lwehlabathi liphupha ngalo lonke eli xesha? Ndibhale amanqaku amaninzi malunga nalo mbandela, kodwa uya kufumana eyona isandula ukwenziwa phantsi kwesihloko esithi 'Ulwazi olusindisa uBomi ngobomi bakho bangoku' kwaye uphantsi esi sixhobo. Ndingathanda ukukuxelela ukuba ndenza yonke le nzame yokukubonisa oku ngaphandle komdla. Ndide ndayixabisa kakhulu ebomini bam. Akukho sizathu senkolo emva kwayo (ndiyakholelwa ukuba inkolo lulawulo lwengqondo) kwaye akukho kukhuthaza ngokwezimali emva kwayo. Ndenza oku kuba ndicinga ukuba yeyona ndlela yokutshintsha. Ke, funda amanqaku aphantsi kweekhonkco eziluhlaza kwaye ndivumele ukuba uve ukuba ucinga ntoni.
Vula ileta kuorhulumente nakumajelo: ukusula emsebenzini kunye nokushushiswa kwintendelezo yabantu
I-Victor Mids yonyaka oNtsingiselo oKhethekileyo wachaze nendlela onokuyenza ngayo imihla ngemihla nge Mindf * ck
UMark Rutte ophantsi komlilo malunga nokuveliswa kwegesi eGroningen ePaw naseJinek
tags: eziziimbalasane, eendaba, kwezopolitiko, Ngaphandle, buxoki. inyani
Dick Klein Oonk wabhala wathi:
2 Septemba 2019 kwi-23: 45
Elinye inqaku elilungileyo, uMartin. Ndingavumelana nayo ngokupheleleyo. Ke kwabelwane ngayo kwi-Twitter nakwi-FB.
3 Septemba 2019 kwi-00: 35
3 Septemba 2019 kwi-08: 59
Mhlawumbi kulungile ukuba uqale uqonde ukuba njengase-UK, imeko yethu yezopolitiko ayisiyonto yedemokhrasi kodwa iyinkosi yomgaqo-siseko. Inkosi / ukumkanikazi unendima koku. Umzekelo omhle use-UK apho uJohnson athi ucele ukumiswa kwepalamente. Ngaba le yimeko okanye le meko inemibala kuthi? Kungenzeka ukuba umgaqo-siseko uphunyeziwe apho iBhunga lasePrivey lithathe isigqibo sokumisa ipalamente. Le meko inokwenzeka nangakumbi kunaleyo sinikwe yona.
Mhlawumbi kude kuthi ga ngoku njengoko uMartin echaza yonke iithiyetha, kodwa …………………. Ndacinga ukuba ngumzekelo apho sonke siveliswa umfanekiso onokuthi ngamanye amaxesha ube yinyani.
3 Septemba 2019 kwi-09: 36
Jonga ukuba ngubani ohleli etroneni eBrussels (faka 'Ursula' kwindawo yokukhangela kule webhusayithi).
Imithetho ye-arristocracy kwaye ifihla emva kokubonakala kwedemokhrasi (kubonakala ngathi kukho ukuphikisana) kuthengiswa yimithombo yeendaba (oomatshini bobuchwephesha) kunye nabadlali esidla ngokubabiza ngokuba 'ngabezopolitiko'.
I-Brexit yaqalwa ukubonisa kuphela i-Europe yonke ukuba i-anti-globalization ikhokelela kubuhlungu kunye nesohlwayo sezemali KANYE nokuzisa iphawundi kunye ne-euro kwinqanaba elifanayo.
Umdlalo udlalwe okwethutyana: ukuthembeka.
UJohnson unokuba yi-hardliner okwethutyana.
Akukho nto ngaphandle kokusebenza.
3 Septemba 2019 kwi-16: 25
3 Septemba 2019 kwi-23: 17
Into abayenzayo ngalo lonke ixesha kukuphosa ibhola ngethemba lokuba siya kuyamkela. Samkele okuninzi kwizizukulwana zamva nje ngoku ukuba siphila kwihlabathi elingalinganiyo nelingenamkhethe.
Logama nje amajoni (athengisa isiGrike ngomphefumlo) asalwela inkosi yawo (yenkolo), imfazwe iya kuhlala ikho. La ngamaxhoba avelisa amandla amabi. Akusabinakho ukuthatha inxaxheba kwizikhumbuzo zesikhumbuzo, ukugxila kumandla akho apha kunye nangoku.
Iqhinga (inkohliso) esiwa ngayo iye yanamathela kwixesha elidlulileyo. Oko kubizwa sisono, isono sexesha 😉
4 Septemba 2019 kwi-08: 23
Ewe, ukuba siyidemokhrasi, andisakholelwa ixesha elide, siphila kwindawo yolwaphulo-mthetho.
« UKUGQIBELA: ipilisi yokuvuselelwa ngokutsha yinyani! Indoda eneminyaka ubudala ye-80 iginya okokuqala emva kovavanyo kwizilwanyana
Umcimbi weBrexit uhlala usisicwangciso esachazwa kwangaphambili »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.414.503
Yintoni eyinyani malunga nokubulawa kukaDerk Wstersum kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
UMartin Vrijland op Ngaba kuya kubakho umlo phakathi kwe-US ne-Iran kungekudala?
ngumntwana we-chris op Ngaba kuya kubakho umlo phakathi kwe-US ne-Iran kungekudala?
SandinG op Yintoni eyinyani malunga nokubulawa kukaDerk Wstersum kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?